इनाम पुरस्कार | प्रेम, लिंग र इन्टरनेट अश्लील छोड्दै
पुरस्कार फाउन्डेसनबाट सबै ब्लगहरू
पाठ योजनाहरू: बन्डलहरू
पाठ योजनाहरू: इन्टरनेट अश्लीलता
पाठ योजनाहरू: सेक्सि।
शपको लागि नियम र सर्तहरू
नं. १५ भ्यालेन्टाइन डे २०२२
नम्बर 14 शरिर 2021
विशेष संस्करण मे २०२१
नम्बर 12 शीतकालीन 2021
नम्बर 11 शरिर 2020
संख्या १० एभी र ग्लोबल समिट विशेष
प्रेस 2022 मा TRF
प्रेस 2021 मा TRF
ब्यालेन्स र असंतुलन
नि: शुल्क स्कूल पाठ योजनाहरू
मेमोरी र लर्निंग
अश्लील र प्रारम्भिक यौन डेब्यू
इ England्ल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डको कानून अन्तर्गत सेक्सटिंग
इन्टरनेट पोर्न लत/समस्याग्रस्त प्रयोगको साथ मद्दत गर्नुहोस्
उमेर प्रमाणीकरण भिडियो
आयु प्रमाणीकरण सम्मेलन रिपोर्ट
उमेर प्रमाणिकरण सम्मेलन २०२० सामग्री
वयस्कों को लागि संसाधन
किशोरका लागि संसाधन
१२ सेकेन्ड मुनिका लागि संसाधन
इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको लागि दुष्ट अभिभावकको गाइड।
22nd मई 2022
12 आमाबाबुको लागि बच्चाहरु संग अश्लील बारेमा कुरा गर्न सुझाव
6th अप्रिल 2022
14th फेब्रुअरी 2022
PMO को प्रलोभन
बिली इलिशले पोर्न उद्योगलाई कालो आँखा दिन्छ
16th डिसेम्बर 2021
साइमन बेली: पोर्नले महिला र केटीहरू विरुद्ध हिंसा बढाउँछ
15th डिसेम्बर 2021
बलात्कार र अश्लील
26th नोभेम्बर 2021
दिमाग धुने बच्चाहरू!
25th अक्टोबर 2021
थप समाचार ब्लगहरूको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
"इन्टरनेटमा सबै गतिविधिहरू मध्ये, अश्‍लील कुराको लत लाग्ने धेरै सम्भावना हुन्छ," डच न्युरोस्यान्टिस्टहरू भन्नुहोस् मेरकर्क एट अल। 2006
पुरस्कृत फाउण्डेशन एक अग्रणी सम्बन्ध र यौन शिक्षा दान हो। नाम यो तथ्यबाट आउँदछ कि दिमाग को इनाम प्रणाली प्रेम र यौनका साथै खाद्य, नवीनता र प्राप्ति जस्ता अन्य प्राकृतिक पुरस्कारहरूको लागि हाम्रो ड्राइभको लागि जिम्मेवार छ। पुरस्कार प्रणाली कृत्रिम कडा इनामहरू जस्तै ड्रग्स, मदिरा, निकोटीन र इन्टरनेट द्वारा अपहरण गर्न सकिन्छ।
रिवार्ड फाउण्डेशन प्रेम सम्बन्धको बारेमा प्रमाण-आधारित जानकारीको प्रमुख स्रोत हो र मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य, सम्बन्ध, प्राप्ति र कानुनी दायित्वमा इन्टरनेट अश्लीलताको प्रभावको बारेमा।
रोयल कलेज अफ जनरल प्रक्टिसनर्सले स्वास्थ्य सेवा र अन्य पेशेवरहरूको लागि इन्टरनेट अश्‍लील सामग्रीको प्रभावको बारेमा हाम्रो प्रशिक्षण कार्यशालालाई मान्यता दियो। मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्ययौन दुर्बलता सहित। यसको समर्थन मा, हामी प्रेम, सेक्स र इन्टरनेट पोर्नोग्राफी को बारे मा एक व्यापक जनता को लागी सुलभ अनुसन्धान बनाउँछौं। हाम्रो नि: शुल्क हेर्नुहोस् पाठ योजनाहरू स्कूलहरु को लागी अब दुबै यस वेबसाइट मा र मा उपलब्ध छ टाइम्स शैक्षिक पूरक वेबसाइट, नि: शुल्क को लागी पनि। हाम्रो पनि हेर्नुहोस् इन्टरनेट पोर्नोग्राफीको लागि आमाबाबुको गाइड। आज इन्टरनेट अश्‍लील सामग्रीको भूमिकालाई स्वीकार नगरी प्रेम र यौन सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्न असम्भव छ। यसले विशेष गरी वयस्कहरूमाझ अपेक्षा र व्यवहारलाई असर गर्छ।
अनुसन्धान बेलायती फिल्म फिल्म वर्गीकरण द्वारा फेला पर्‍यो कि बेलायतमा १ month लाख बच्चाहरु एक महिना अश्‍लील सामग्री हेर्छन्। चौध वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरका 1.4० प्रतिशत बच्चाहरूले पहिलो पटक अनलाइन पोर्न देखे। धेरै जसो 60२ प्रतिशतले भने कि तिनीहरू दुर्घटनावश यसमा ठक्कर खाए र अश्‍लील सामग्री हेर्ने आशा गरेनन्। अधिकांश अभिभावक, per 62 प्रतिशतले यी हानिकारक साइटहरूका लागि उमेर प्रमाणिकरण हेर्न चाहन्छन्। र ११ देखि १ 83 बर्ष उमेरका percent 56 प्रतिशतले 'ओभर -१'s' सामग्री अनलाइनबाट सुरक्षित गर्न चाहन्छ।
हामी यो2मिनेट सिफारिस गर्दछौं एनिमेसन प्राइमरको रूपमा। मस्तिष्कमा अश्लील प्रभावको एक राम्रो विवरणको लागि, यसलाई हेर्नुहोस्5मिनेट अंश टिभी वृत्तचित्रबाट। यसमा न्युरो सर्जन, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको अनुसन्धान र केही युवा प्रयोगकर्ताहरूको प्रत्यक्ष अनुभव प्रस्तुत गरिएको छ।
यहाँ केहि सरल छन् स्वयम मूल्याङ्कन न्युरो साइन्टिस्टहरू र क्लिनीशियनहरू द्वारा डिजाइन गरिएको व्यायामहरू पोर्नले तपाईलाई वा तपाइँको नजिकको कसैलाई असर गरिरहेको छ भनेर हेर्नका लागि।
इन्टरनेट पोर्नोग्राफी अतीतको अश्लील जस्तो छैन। यो एक 'अलौकिक' प्रोत्साहन हो। नियमित रूपमा बा bin्ग हुँदा यसले कोकेन वा हेरोइनमा समान रूपमा दिमागमा असर गर्न सक्छ। अश्‍लीलता विशेष गरी बच्चाहरूको लागि अनुपयुक्त हो जसले वयस्क साइटहरूमा प्रयोगकर्ताहरूको २०--20०% बनाउँछ। यो एक्लैले युके सरकारको उमेर प्रमाणीकरण कानून द्वारा बच्चाहरू द्वारा पहुँच प्रतिबन्ध गर्न र तिनीहरूको स्वास्थ्य लाई बचाउन न्यायसंगत गर्दछ।
अनुसार उमेर जाँचको अभावका कारण सात वर्षको उमेरका बच्चाहरूलाई कट्टर अश्लील सामग्रीको खुलासा गरिएको छ अनुसन्धान फिल्म वर्गीकरण को ब्रिटिश बोर्ड द्वारा कमीशन। अश्‍लील सामग्री नाफाको लागि बनेको छ, यो एक अरबौं डलर उद्योग हो। यो बच्चाहरूलाई सेक्स र सम्बन्धको बारेमा सिकाउन बनाइएको छैन।
सबैभन्दा ठूलो अनियमित सामाजिक प्रयोग
इतिहासमा पहिला कहिल्यै यति धेरै उच्च उत्तेजक यौन सामग्री अहिले सम्म स्वतन्त्र रूपमा उपलब्ध छैन। यो मानवजातिको इतिहासमा सब भन्दा ठूलो, अनियमित सामाजिक प्रयोग हो। विगतमा हार्डकोर पोर्नोग्राफी पहुँच गर्न गाह्रो थियो। यो मुख्यतया इजाजतपत्र प्राप्त वयस्क पसलबाट आएको हो जसले १ 18 बर्ष मुनिका जो कोहीलाई प्रवेश गर्न निषेध गरेको छ। आज, अधिकांश अश्‍लील सामग्रीहरू स्मार्टफोन र ट्याब्लेट मार्फत नि: शुल्क पहुँच गर्न सकिन्छ। आगन्तुकहरूको लागि प्रभावी उमेर प्रमाणीकरण हराइरहेको छ। अत्यधिक प्रयोग एक उत्पादन गर्दैछ विस्तृत रेंज of मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य समस्याहरू जस्तै सामाजिक चिन्ता, उदासीनता, यौन डिसफंक्शन र थोरै नामको लत। यो सबै उमेर समूहहरूमा भइरहेको छ।
अनुसन्धानले देखाउँदछ कि इन्टरनेट पोर्नोग्राफीमा द्वि घातुमान व्यवहार चासो कम गर्न सक्दछ, र वास्तविक जीवन यौन सम्बन्धबाट सन्तुष्टि। युवा देखि मध्यम आयु वर्गका पुरुषहरूको बढ्दो संख्या उनीहरूका साझेदारहरूसँग यौन प्रदर्शन गर्न असमर्थ छन्। युवाहरू आफ्नो यौन व्यवहारमा पनि बढी आक्रामक र हिंस्रक हुँदैछन्।
हाम्रो उद्देश्य भनेको वयस्कहरू र पेशेवरहरूलाई उनीहरूको प्रमाणहरू पहुँच गर्न सहयोग गर्नु हो जुन उनीहरू बिरामीहरू, ग्राहकहरू र आफ्नै बच्चाहरूलाई मद्दत गर्न उचित कदम चाल्न पर्याप्त आत्मविश्वास महसुस गर्न आवश्यक छ। अस्थायी रूपमा हस्तमैथुन हटाउने, वा कसैको फ्रिक्वेन्सी कम गर्नु भनेको एक लत र अश्लील प्रेरित यौन समस्याबाट उब्जाउनु हो - अरु केहि होइन। पुरस्कार फाउंडेशनले स्थायी जीवनशैलीको रूपमा त्यागको पक्षमा वकालत गर्दैन.
'औद्योगिक शक्ति' इन्टरनेट पोर्न
अश्लील द्वि घातुमान यौन स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, व्यवहार, सम्बन्ध, प्राप्ति, उत्पादकता र आपराधिकता मा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। जब सम्म प्रयोगकर्ताले द्वि घातुमान गर्न जारी राख्छ, दिमाग परिवर्तनहरू अधिक सren्केत हुन्छ र उल्टो गाह्रो हुन्छ। कहिले काँही प्रयोगले चिरस्थायी नोक्सान गर्न असम्भव छ। कमजोर कार्यात्मक मस्तिष्क परिवर्तनहरू भएका छन् रेकर्ड गरियो प्रति हप्ता ography घण्टा जति अश्‍लील सामग्रीको प्रयोगको साथ।
हाम्रो दिमागले यति हाइपर-उत्तेजनासँग सामना गर्न अनुकूल बनाएको छैन। बच्चाहरू विशेष रूपमा निःशुल्क, स्ट्रिमि hardcore कट्टर ईन्टरनेट पोर्नोग्राफीको अंतहीन आपूर्तिको लागि कमजोर हुन्छन्। यो साइकोसेक्शुअल विकास र शिक्षाको एक महत्त्वपूर्ण चरणमा तिनीहरूको संवेदनशील दिमागमा यसको शक्तिशाली प्रभावको कारण हो।
धेरै जसो इन्टरनेट अश्‍लीलता आज आत्मीयता र विश्वासको नमुना गर्दैन, बरु असुरक्षित यौन सम्बन्ध, जबरजस्ती र हिंसा, विशेष गरी महिला र जातीय अल्पसंख्यकप्रति। बच्चाहरूले आफ्नो दिमाग प्रोग्रामि are गरीरहेछन् निरन्तर नवीनता र उच्च स्तरको कन्ट्रिवेटेड उत्तेजनाको लागि जुन वास्तविक जीवन साझेदारहरू मेल खाँदैन। यो पनि voyeurs हुन तिनीहरूलाई प्रशिक्षण।
एउटै मा धेरै यौन लिade्ग अपर्याप्त महसुस गर्दै छन् र उनीहरूको अन्तर्देशीय सीपहरु सिक्न असफल छन् उनीहरूलाई लामो अवधिको लागि स्वस्थ, घनिष्ठ सम्बन्ध विकास गर्न आवश्यक छ। यसले एक्लोपना, सामाजिक चिन्ता र बढ्दो संख्यामा उदासीनतातिर अग्रसर गर्दछ।
अधिकांश युवा जनहरू पहिलो पटक अश्‍लील सामग्री हेर्नेहरू दुर्घटनाग्रस्त थिए, जसमा %०% भन्दा बढी केटाकेटी ११-१-60 भन्दा बढी जो अश्‍लील सामग्री हेरेका थिए उनीहरूले अश्‍लील सामग्री हेर्नु अनजाने कुरा हो भनेर हालसालै जानकारी दिएका छन्। अनुसन्धान। बच्चाहरूले वर्णन गरे "ग्रस आउट" र "कन्फ्युज"। यो विशेष गरी लागू गरियो जब तिनीहरूले १० बर्ष भन्दा कम उमेरको अश्लील सामग्री देखे।
यो धेरै आमा बुबा को लागी आश्चर्यजनक हुन सक्छ। यदि तपाईं अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने, हाम्रो हेर्नुहोस् इन्टरनेट पोर्नोग्राफीका लागि अभिभावकको गाइड । यसको उद्देश्य आमाबुवा र स्याहारवाहकहरूलाई उनीहरूका चुनौतीपूर्ण कुराकानीहरूको लागि तपाइँका बालबालिकाहरूसँग सुसज्जित गर्न र आवश्यक परेमा विद्यालयहरूसँग सहयोग समन्वय गर्न सहयोग पुर्‍याउनु हो। केन्ट पुलिस चेतावनी दिनुहोस् कि यदि आमाबुवाहरू फोन करारका लागि जिम्मेवार छन् भने उनीहरूका बच्चाहरूको 'सेक्सटिंग' को लागि मुद्दा चलाउन सकिन्छ। हाम्रो पृष्ठ हेर्नुहोस् sexting र स्कटल्याण्ड मा कानून र यौन सम्बन्धको लागि इ England्ल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्ड.
हामीले भर्खरै नि: शुल्क श्रृंखला सुरु गरेका छौं पाठ योजनाहरू शिक्षकहरूको लागि जुन "सेक्स्टि to्गको परिचय" सँग व्यवहार गर्ने छ। "सेक्सिting र किशोर दिमाग"; "सेक्सिting्ग, कानून र तपाईं"; "ट्रायलमा अश्लीलता"; "प्रेम, सेक्स र अश्लीलता"; "अश्लील साहित्य र मानसिक स्वास्थ्य", र "महान अश्लील प्रयोग"। तिनीहरू विभिन्न समृद्ध, रमाईलो र अन्तर्क्रियात्मक अभ्यास र संसाधनहरू हुन् जसले विद्यार्थीहरूलाई यी सबै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू छलफल गर्न सुरक्षित ठाउँ प्रदान गर्दछ। त्यहाँ कुनै दोष वा लाज छैन, केवल तथ्यहरू, त्यसैले मानिसहरूले सूचित छनौटहरू गर्न सक्दछन्।
वर्तमान पाठहरू विश्वास आधारित स्कूलहरूको लागि पनि उपयुक्त छन्। कुनै अश्लीलता देखाइएको छैन। कुनै पनि भाषा जुन धार्मिक सिद्धान्तको विपरित हुन सक्छ परिमार्जन गर्न सकिन्छ।
पुरस्कार फाउंडेशन मॉनिटर अनुसन्धान
पुरस्कार फाउण्डेशनले दैनिक अनुसन्धानमा नयाँ अनुसन्धानको अनुगमन गर्दछ र हाम्रा सामग्रीहरूमा विकासलाई समाहित गर्दछ। हामी आफ्नै अनुसन्धान पनि उत्पादन गर्छौं समीक्षा पछिल्लो शोधको ताकि अन्य नयाँ विकासको साथ अप-टु-डेट रहन सक्दछ।
त्यहाँ छ छ अध्ययनहरू त्यो एक प्रदर्शन अश्लील प्रयोग र हानिहरू बीचको कारणले लिङ्क त्यो प्रयोगबाट उत्पन्न हुन्छ।
पुरस्कृत फाउन्डेशनमा हामी रिपोर्ट गर्दछौं कथाहरू इन्टरनेट अश्‍लील सामग्रीको समस्याग्रस्त प्रयोग गर्न सक्ने हजारौं पुरुष र महिलाहरूबाट। यो अनौपचारिक अनुसन्धान वर्तमान प्रवृत्तिहरूलाई ध्यानमा राख्न महत्वपूर्ण छ जुन औपचारिक शैक्षिक अनुसन्धानमा प्रतिबिम्बित हुन धेरै समय लिन सक्दछ। धेरैले अश्लील छोड्ने प्रयोग गरेका छन् र यसको परिणाम स्वरूप विभिन्न मानसिक र शारीरिक लाभहरू अनुभव गरेका छन्। हेर्नुहोस् यो जवान मान्छे's story।
पोर्नोग्राफी कम्पनीहरू इन्टरनेट विकास र डिजाइनको क्रममा अग्रस्थानमा छन्। इन्टरनेट पोर्नोग्राफी द्वारा लगातार ओवरस्मुलेसनको कारण दिमागले अधिकको लागि शक्तिशाली लालसा उत्पन्न गर्दछ। यी लालसाहरूले समयको साथ एक अश्‍लील प्रयोगकर्ताको विचारहरू र व्यवहारलाई असर गर्दछ। बढ्दो संख्यामा प्रयोगकर्ताहरूको लागि यसले नेतृत्व लिन सक्छ बाध्यकारी यौन व्यवहार विकार। विश्व स्वास्थ्य संगठनको रोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण (आईसीडी -११) को एघारौं संशोधनले हालै यो निदानमा बाध्य पार्‍यो अश्‍लील सामग्री र हस्तमैथुन प्रयोग। नियन्त्रण बाहिर पोर्न र हस्तमैथुन एक लत बिरामी को रूप मा वर्गीकृत गर्न सक्दछ अन्यथा ICD-11 प्रयोग गरेर अनिर्दिष्ट।
यस अनुसार नवीनतम अनुसन्धान, 80०% भन्दा बढि व्यक्ति बाध्यकारी यौन व्यवहार रिपोर्टको लागि चिकित्सा सहयोग खोजिरहेका छन् उनीहरूसँग अश्लील सम्बन्धी समस्या छ। यो उत्कृष्ट हेर्नुहोस् TEDx कुरा (Min मिनेट) जनवरी २०२० देखि क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले न्यूरो साइन्टिस्ट क्यास्पर श्मिटद्वारा “बाध्यकारी यौन व्यवहार डिसआर्डर” को बारे सिक्न प्रशिक्षण पायो।
आज १० वा १ years वर्ष अघि अश्लील साहित्यको तुलनामा अश्लीलता उपलब्ध मात्रा र उत्तेजनाको स्तरको हिसाबले 'औद्योगिक शक्ति' हो। यसको प्रयोग व्यक्तिगत छनौट हो, हामी वयस्कहरूको लागि कानूनी पोर्नोग्राफी प्रतिबन्ध गर्न बाहिर छैनौं, तर बच्चाहरूलाई सुरक्षित गर्नुपर्दछ। अश्‍लील कुराले उत्तेजित अत्यधिक हस्तमैथुनले केहिको लागि मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। हामी प्रयोगकर्तालाई हालै उपलब्ध अनुसन्धानबाट राम्रो प्रमाणको आधारमा 'सूचित' विकल्प बनाउनको लागि स्थितिमा हुन मद्दत गर्न चाहन्छौं र आवश्यक भएमा साइनपोस्ट रिकभरी विकल्पहरू पनि। अस्थायी रूपमा हस्तमैथुन हटाउने, वा फ्रिक्वेन्सी कम गर्नु भनेको एक लतबाट फर्कनु भनेको यौन कन्डिसनको कड कोर सामग्री र अश्लील प्रेरित यौन समस्या हो - अरू केहि छैन। पुरस्कार फाउंडेशनले स्थायी जीवनशैलीको रूपमा त्यागको पक्षमा वकालत गर्दैन.
हामी बच्चाहरूको इन्टरनेट पोर्नोग्राफीमा सजीलो पहुँच कम गर्न अभियान गर्छौं। दर्जनौं अनुसन्धान कागजातहरूले स brain्केत गर्दछ कि यो बच्चाहरूलाई उनीहरूको मस्तिष्क विकासको कमजोर चरणमा हानिकारक छ। विगत years बर्षमा बाल-बाल-बाल यौन दुर्व्यवहारमा नाटकीय वृद्धि भएको छ र हाम्रो कार्यशालामा उपस्थित भएका र सम्भवतः समेत स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुसार अश्लील सम्बन्धी यौन चोटहरूमा मृत्यु। यो घरेलु हिंसासँग जोडिएको छ, मुख्यतया महिला बिरूद्ध पुरुषहरूले गर्ने।
हामी व्यावसायिक पोर्न साइटहरू र सोशल मिडिया साइटहरूको लागि प्रभावी उमेर प्रमाणीकरण लागू गर्न बेलायत सरकारको पहलको पक्षमा छौं ताकि बच्चाहरू यति सजिलैसँग ठक्कर खाँदैनन्। यसले जोखिमको बारेमा शिक्षाको आवश्यकतालाई प्रतिस्थापन गर्दैन। र यदि हामीले केही गरेनौं भने को फाइदा? बहु-अरब डलर अश्लील उद्योग। बेलायत सरकारले प्रस्तावित सोशल मिडिया मार्फत उपलब्ध अश्‍लील सामग्रीहरूको कारोबार गर्ने योजना बनाएको छ अनलाइन हर्म्समा सेतो पेपर। २०२२ सम्म यो सब भन्दा चाँडो कानून हुनसक्दैन।
यस वेबसाइटको जानकारीले व्यक्तिलाई सफल, मायालु यौन सम्बन्धको आनन्द लिने सम्भावना सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। हामी २०२० को दोस्रो आधामा वेबसाइटका लागि नयाँ सेक्शनहरू योजना गर्दैछौं। यदि तपाईं कुनै सम्बन्धित शीर्षक थप्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई info@rewardfoundation.org मा सम्पर्क गरेर हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
पुरस्कार फाउंडेशन गर्छ उपचार प्रदान नगर्ने न त कानुनी सल्लाह प्रदान गर्दछ। जहाँसम्म, हामी व्यक्तिहरूको रिकभरीको लागि साइनपोस्ट मार्गहरू गर्दछौं जसको प्रयोग समस्याग्रस्त भएको छ। हाम्रो उद्देश्य वयस्कहरू र पेशेवरहरूलाई प्रमाण पहुँच गर्न र उनीहरूलाई उचित कार्यवाही गर्न अनुमति दिन सहयोग पुर्‍याउनु हो।
इन्टरनेट पोर्न नि: शुल्क छ, तर बच्चाहरु यसको मूल्य तिर्दैछन्
अडियोबुक - श्रव्यमा यसलाई नि: शुल्क पाउनुहोस्
© 2021 रिभर फोर्ड: सबै अधिकार RESERVED
पुरस्कृत फाउण्डेशन, १५ क्याल्टन रोड, एडिनबर्ग, EH15 D डीएल: स्कटिश चैरिटेबल निगमित संगठन SC8